Teratany · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Teratany · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Teratany tamin'ny Oktobra, 2017
Amerika Latina 19 Oktobra 2017
Amerika Latina 16 Oktobra 2017
Ady, fifandonana ary rà latsaka no hany mahaliana ny media ny mitatitra azy, ary tsy raharahainy izay lohahevitra hafa manandanja aminay ihany koa. Ao Sarayaku, anokananay ezaka betsaka tokoa ny fampahafantarana ny Kawsay Sacha, tolokevitray ho aminà fomba fiaina iray vaovao izay anasàna ny olona ho tsara fihavanana amin'ny tontolo misy azy, amin'ny tenany ary amin'ny hafa.
Roa taona lasa izay, nomena fahazoan-dalana hiasa ny Tohodranon'i Belo Monte ao amin'ny faritra avaratry Parà any Brezila ary ao anatin'ny dingana farany amin'ny fananganana. Na izany aza, mbola miatrika fiampangàna fa manitsakitsaka ny zo ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ity orinasa mpamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny rano ity.
Amerika Latina 12 Oktobra 2017
Amerika Latina 11 Oktobra 2017
Amerika Avaratra 04 Oktobra 2017
"...manome sehatra ho an'ireo vehivavy vazimba teratany izy ary tsy mametraka fitsaratsaràna ao anatin'ny tantara tian'izy ireny horesahana amin'ny alàlan'ny Ikala Serfa."
Amerika Avaratra 03 Oktobra 2017